Rocket League ဘေးသို့ ပွတ်ဆွဲပါ။ – လှိုင်သာယာ&Hack – Android Cheats သိကောင်းစရာများ
Rocket League ၏ထုတ်လုပ်သူများထံမှ, ကားဘောလုံးကို မိုဘိုင်းကိရိယာများအတွက် ပြန်လည်ပုံဖော်ထားသည်။! အလိုလိုသိနိုင်သော ထိတွေ့ထိန်းချုပ်မှုများဖြင့် ဂိမ်းတွင်ဝင်ရောက်ပါ။. မင်းရဲ့ပြိုင်ဘက်ရဲ့ပိုက်ထဲကို ဘောလုံးထည့်ရတာ ရိုးရှင်းပါတယ်။, ဒါပေမယ့် သတိထားပါ။! မင်းရဲ့ပြိုင်ဘက်က ဂိုးသွင်းဖို့ကြိုးစားလိမ့်မယ်။. ပိုမိုမြန်ဆန်စေရန် သင်၏မြှင့်တင်မှုကို နှိပ်ပါ။, သို့မဟုတ် သင့်ပြိုင်ဘက်ကို အံ့သြသွားအောင် လေထဲတွင် ပြင်းထန်သော လှုပ်ရှားမှုအချို့ကို ဆွဲထုတ်ရန် မြေပြင်မှ ဆင်းသက်ရန် ၎င်းကို အသုံးပြုပါ။.
ပွဲက နှစ်မိနစ်ပဲကြာတယ်။, Rocket League Sideswipe ကို သင် ဘယ်နေရာမှာမဆို အလွယ်တကူ ကောက်ယူပြီး ကစားနိုင်ပါတယ်။. ကံကောင်းပါစေ!
1v1 သို့မဟုတ် 2v2 ဂိမ်းတွင် မျက်နှာပိတ်ပါ။! Rocket League Sideswipe သည် မည်သည့်နေရာမှမဆို အလွယ်တကူ ရယူကစားနိုင်သည်။! သင်သည် Rocket League ၏ ဝါရင့်သူဖြစ်လျှင် သို့မဟုတ် ကွင်းအတွင်း သင့်လမ်းကို သင်ယူရုံမျှဖြင့် အရေးမကြီးပါ။.
သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူ သီးသန့်ပွဲများကို ပျော်ရွှင်ပါ။, သို့မဟုတ် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ကစားသမားများနှင့် ယှဉ်ပြိုင်မှုပွဲစဉ်များကို အွန်လိုင်းတွင် ကစားပါ။! အပြိုင်အဆိုင်အဆင့်သို့ တက်လှမ်းပါ။, ပြီးတော့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက ဦးဆောင်သူစာရင်းကိုတောင် ဖြိုခွဲလိုက်ပါ။.
Rocket Pass နှင့် Seasons များ
Unlock လုပ်ပါ items in the Rocket Pass just by playing Online Matches. ရာသီတစ်ခုစီတိုင်း Rocket Pass ပစ္စည်းအသစ်များကို ရှာဖွေပါ။. Rocket League Sideswipe တွင်လည်း ယှဉ်ပြိုင်မှုရာသီများပါရှိသည်။. ရာသီတိုင်းတွင် ယှဉ်ပြိုင်မှုမုဒ်များတွင် သင်တတ်နိုင်သမျှ မြင့်အောင်တက်ပြီး ရာသီပြီးဆုံးသည်နှင့် သင့်အဆင့်အလိုက် ကစားသမားဘွဲ့များ ရယူပါ.
ကစားရုံဖြင့် သင့်ကားအတွက် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသော အရာအသစ်များကို လော့ခ်ဖွင့်ပါ။! Rocket League Sideswipe တွင် ကားများကဲ့သို့ အရာများနှင့် ထောင်ပေါင်းများစွာသော စိတ်ကြိုက်ပေါင်းစပ်မှုများပါရှိသည်။, ဘီးများ, အမှတ်အသားများ, ပို. ကွင်းထဲရောက်တာနဲ့ ကြေငြာချက်ထုတ်ပါ။.
soccar တွင် 1v1 နှင့် 2v2 မုဒ်များအပြင် (ကားများနှင့်ဘောလုံး) Hoops mode ကိုစစ်ဆေးပါ။. Quick Chat Stickers ဖြင့် သင့်အသင်းဖော်များနှင့် ပြိုင်ဘက်များနှင့် ဆက်သွယ်ပါ။! ပေါင်းတယ်။, freeplay တွင် သင်၏အရည်အချင်းကို မြှင့်တင်ပါ။, အော့ဖ်လိုင်းပွဲများ, နှင့် သင်ခန်းစာများ!
နောက်ဆုံးရသတင်းများနှင့် အပ်ဒိတ်များအားလုံးကို လိုက်နာပါ။:
← တောရိပ်: စိတ်ကူးယဉ်မြင်းပြိုင်ပွဲများ – လှိုင်သာယာ&Hack စိတ်ကူးယဉ်ပုံ – လှိုင်သာယာ&Hack →